Sida loo doorto soosaarayaasha xafaayadda dhallaanka ee Shiinaha
Soo saareyaasha xafaayadda ee Shiinaha waxay dhaafeen 31 bilyan oo unug oo wax soo saar ah sanadkii 2017, oo awoodda wax soo saarku way sii kordheysaa sanadba sanadka ka dambeeya. Kordhiyeyaal aad iyo aad u badan oo ka kala yimid adduunka oo idil waxay doortaan soosaarayaasha xafaayadda dhallaanka Shiinaha, laakiin sida loo helo soo saare lagu kalsoonaan karo Shiinaha? Waa maxay ...
Si loogu dabaaldego Iidda Dhexe ee Dayrta, Baron wuxuu abaabulay munaasabad Bo Bing gaar ah oo loogu talagalay dhammaan shaqaalaha Waaxda Dibadda. Markan waxaan dooranay badeecooyin kala duwan oo leh qiime kala duwan abaalmarino loogu talagalay ciyaartoydii guuleysatay, oo ay kujiraan shaambo, maydhiska jirka, saliida cuntada, faakuumka, koobka dahaarka kululaynta, ...
Baron waxaa la aasaasay sanadkii 2009 iyadoo ay maalgashi ka sameysay Shirkadda Baron Group International Holding Company. Xarunta dhexe ee shirkaddu waxay ku taal Quanzhou, gobolka Fujian. Waxaan bixinaa adeegyo kaladuwan oo buuxa oo ay kujiraan cilmi baaris & horumarin, qaabeynta, waxsoosaar buuxa, iibin iyo macaamiil
Baron waxaa caddeeyay OEKO-TEX Sebtember 10, 2020
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in Baron uu caddeeyay OEKO-TEX bishii Sebtember 10, 2020. OEKO-TEX waa calaamado ganacsi oo diiwaangashan, oo matalaya sumadaha alaabada iyo shahaadooyinka shirkadda ee la soo saaray iyo adeegyada kale ee ay bixiso Ururka Caalamiga ah ee Cilmi-baarista iyo Tijaabinta Qeybta qoraalka ...
Maxay hooyooyinka u isticmaalaan xafaayadaha Bamboo?
Xafaayaddii ugu horraysay ee baasboorka 'Besuper bamboo' ayaa timaadda, isla markaaba noqota mid ku dhacda hooyooyinka iyo carruurta. Maxay xafaayadda bamboo u tahay mid soo jiidasho leh oo caan ah? Maanta aan ogaanno runta caannimadeeda. -Eco-saaxiibtinimo iyo ammaan. Bamboo waa mid ka mid ah dhirta ugu habboon bey'ada adduunka oo 100% waa la noolaan karaa ...
Xafaayad Dhal dhashay, Xafaayada la tuuro, Bamboo Xafaayada Xajmiga Xl, Xafaayadda Eco Tayada Sare, Masaxa Ilmaha Loogu Talo Galay Maqaarka Xasaasiga ah, Xafaayadda Ilmaha,
Xafaayad Dhal dhashay, Xafaayadda Ilmaha, Xafaayadda Eco Tayada Sare, Xafaayada la tuuro, Masaxa Ilmaha Loogu Talo Galay Maqaarka Xasaasiga ah, Bamboo Xafaayada Xajmiga Xl,